အီတလီနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးယောဂခရီးဆုံးများအာလုံးရန် Ultimate လမ်းညွှန် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရထား Travel အီတလီ > အီတလီနိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးယောဂခရီးဆုံးများအာလုံးရန် Ultimate လမ်းညွှန်
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 25/01/2021)
တစ်ဦးအားလပ်ရက်ခရီးလမ်းဆုံးအဖြစ်အီတလီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာသင်ရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ရေပုံးစာရင်းပယ်ခြစ်ရာတစ်ခုခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ. သငျသညျအထပျထအီတလီနိုင်ငံမှပြန်လာနှင့်နေဆဲဒီပါမြေ၏အလုံအလောက်ရှိသည်နှင့်ယင်း၏အရသာမနိုင် ပုံမှန်အတိုင်း, မဟုတ်က၎င်း၏နှင့်အတူပျင်းခံရ သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှု.
ထိုသို့သောသင်တို့တွင်အထင်နိုင်ပါတယ်အားလပ်ရက်နီးပါးမည်သည့်အမျိုးအစားကမ်းလှမ်းတဲ့တိုင်းပြည်၏ဤမြေထဲကျောက်မျက်များ၏ကျက်သရေဖြစ်ပါတယ်. ပစ္စုပ္ပန်လမ်းညွှန်အီတလီယောဂခရီးစဉ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်. ဒါပေမဲ့, ပင် သင်တစ်ဦးယောဂဆုတ်ခွာနေများအတွက်တာပေါ့လျှင်, ၏ကျန်ကိုလျစ်လျူရှုဖို့ခက်ရဲ့ အီတလီနိုင်ငံရဲ့အံ့ဘွယ်သောအမှု.
အစားအစာသိသာကတည်းကအာရုံသို့ရောက်သွားဖြစ်ပါတယ် အီတလီအစားအစာ ကမ်ဘာပျေါမှာအကောင်းဆုံးတို့တွင်နှင့်တိုင်းပြည်ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားသူတို့အဘို့တစ်လူကြိုက်များဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ် အချက်အပြုတ်အားလပ်ရက်. အတူပေါင်းစပ်အလင်းကိုတောငျကိုတိုင်းဒေသကြီးများ အလွန်နှစ်သက်ဘွယ်ကောင်းသော ကမ်းရိုးတန်းလည်းအီတလီနိုင်ငံတစ်အောင် လူကြိုက်များဦးတည်ရာ အဘို့ စက်ဘီးစီးခြင်းအားလပ်ရက်, အများအပြား surfers ထိုသို့အထဲ၌တည်သောစိတ်အားထက်သန်ဖော်ပြခြင်းမ.
တွင် 2017, တစ်ဦး စံချိန်ချိုး 60 သန်းခရီးသွားဧည့် တိုင်းပြည်လည်ပတ်ခဲ့. အီတလီနိုင်ငံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ခုအဓိကအကြောင်းရင်းများ၏ထိုကဲ့သို့သောလူကြိုက်များအားလပ်ရက်ခရီးလမ်းဆုံးဖြစ်ပါသည်. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, အီတလီမြေပေါ်တွင်နီးပါးတစ်ဦးချင်းစီသည်မြို့နှင့်ဒေသ၏သဘာဝအလှတရားရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. သင်မှာ .... ရှိသည် နေသာတောင်ကုန်းပေါ်တွင်စိမ်းလန်းစိုပြေဥယျာဉ်, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာတောင်များ, အဖြစ်ကြောက်မက်ဘွယ်နှင့်အတူပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းပဒေသာ surfing ဟော့စပေါ့ နှင့် ချစ်စရာကောင်းငါးဖမ်းကျေးရွာပေါင်း, သမိုင်းဆိုင်ရာအထိမ်းအမှတလှည့်.
သမိုင်း၏စကားပြောသော, ဒီအမှန်တကယ်အီတလီနိုင်ငံထိုကဲ့သို့သောစေသည်ဒုတိယအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ် သွားရောက်အကြီးအရာအရပျ. တစ်ခုချင်းစီကိုဒေသ, မြို့, နှင့်နည်းနည်းမြို့သမိုင်း၌ယစ်မူးနေသည်. ရောမအင်ပါယာ၏စမှတ်အဖြစ်, အီတလီနိုင်ငံလူ့ယဉ်ကျေးမှု၏ပုခက်အဖြစ်ယူဆနိုင်ပါတယ်. လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်များစွာကိုလည်းအဓိကအီတလီမြို့ကြီးများတစ်လျှောက်လုံးအနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်အစဉ်အလာကဆက်ပြောသည်. အတိုချုပ်ပြောရရင်, သင်ဒီမှာပျင်းရမရနိုငျ.
အီတလီနှင့် ပတ်သက်. အခြားအကြီးအရာ? တိုင်းပြည်မဟုတ်ဘဲနှောင်းပိုင်းတွင်တစ်စုတစ်စည်းတည်းပြခဲ့ပါတယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများထက်ပိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းသီးခြားစီပြောင်းလဲသောကြောင့်, အများအပြားသည်ဒေသခံအစားအစာများရှိပါတယ်, အခြားအနေဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီထူးခြားတဲ့ကွဲပြားခြားနားသော. ဤသူသည်သင်တို့မျိုးစုံမြည်းစမ်းခြင်းနှင့်ရှေ့ဆက်ကြိုးစားနေအများအပြားရှိသည်ဆိုလိုတယ်!
Tuscany ခရီးသွားများကအီတလီမှာထူးခြားတဲ့ဒေသနှင့်တဦးတည်းအကြီးအကျယ်ဆည်းကပ်-ပြီးနောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာသူတို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူရောက်ရှိလာခဲ့တူသောလူတိုင်းခံစားမိစေသည်ရုံဒေသ-တိကျတဲ့တိုင်းပြည်အစားအစာမဟုတ်ဘူး, ဒါကြောင့်လည်းဖွင့် ထူးခြားသောမြင်ကွင်းများ နှင့်အထင်ကြီးသဘောသဘာဝ settings ကို. ဒီမှာအသေးစားတောင်များနှင့်ချိုင့်ဖန်တီး ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အမြင်များ, ဒါပေမဲ့သူတို့မှာလည်းဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်စံပြ setting ကိုရှိပါတယ်, Tuscany ပဒေသာရှိပါတယ်ရာ.
ထိုကွောငျ့, သငျသညျမဖွစျသငျ့ အံ့အားသင့် Tuscany အများအပြားယောဂဆုတ်ခွာကိုလည်းဆက်ကပ်ကြောင်းသတိပြုမိစေရန် စပျစ်ရည်ကိုအရသာခရီးစဉ်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကပင်စတင်ထံမှယောဂနှင့်စပျစ်ရည်အတန်းပူဇော်, နှစ်ဦးစလုံးကမ္ဘာရဲ့အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ပြီး. အကြှနျုပျ၏အကွံဉာဏျ? လုပ်သာလုပ်! သင်ဒီမှာမြည်းစမ်း Tuscany ၏ချစ်စရာကောင်းကျေးလက်နိုင်ဝိုင်အစဉ်အဆက်သင်၏အ fondest အားလပ်ရက်အမှတ်တရများ၏တဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်.
Sardinia အီတလီနိုင်ငံသွားရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါမှာအခြားလူကြိုက်များဒေသဖြစ်ပါသည်, နှင့်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်. ဒါဟာကောင်းသောလှိုင်း၏ပဒေသာထောက်ပံ့ကတည်းက၎င်း၏စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းက Yogi နှင့် surfers နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအကွိုကျဆုံးဦးတည်ရာကို, တွေးတောဆင်ခြင်သို့မဟုတ်လုပ်ဖို့ရာအတွက်ဒါပေမယ့်လည်းထူးခြားတဲ့သောနေရာများ နေ ရိုသေစွာနှုတ်ဆက်ခြင်း.
ဤသည်ကြီးမားသောကျွန်းနီးပါးရှိပါတယ် 2,000 ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းကီလိုမီတာ, ဒါပေမယ့်ကုန်းတွင်းပိုင်းကိုလည်းတောင်တန်းဒေသများနှင့်များများကမ်းလှမ်း တောင်တက်လမ်းကြောင်း, ဒီသင်၏စိတ်ဝင်စားမှုအကြားမှာလည်းပါလျှင်. လည်း, ကျွန်း၏နာမတော်ကိုဆိုလိုအဖြစ်, လတ်ဆတ်သော ငါးနှင့်ပင်လယ်စာ ကရုဏာဒီမှာပါ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အရသာဘူးသီးကိုလည်းအားရစရာအဘို့ဖွစျလိမျ့မညျ.
Olbia Cagliari မှရထား
Cagliari Olbia မှရထား
Sassari Olbia မှရထား
Olbia Sassari မှရထား
အဆိုပါ Ragusa ပြည်နယ်အဖြစ်ကောင်းစွာသေးနောက်တဖန်တစ်အကြိုက်ဆုံးယောဂအီတလီမှာဦးတည်ရာနှင့်လည်း surfer ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါသည် (ကစစ္စလီကျွန်းများ၏ကျွန်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးရဲ့ကတည်းက). ယင်းအပေါ်ယောဂအနေဖြင့် ကမ်းခြေ မတ်တပ်ရပ်-အထိလှော်ယောဂ, သငျသညျယောဂနှင့်ရေအရာအားလုံးကိုသင်၏နှလုံးအလိုဆန္ဒများကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် အားကစား နှင့်အကြား၌ရှိသမျှကို. လေ့ကျင့် Ragusa အတွက်ယောဂ သင့်ရဲ့ဘက်ထရီအားသွင်းပါလိမ့်မယ်, သငျသညျအနှောင်းပိုင်း၌သွားရောက်ကြည့်ရှုအထူးသဖြင့်ဆိုရင် နွေရာသီ အဆိုပါလေစုံလင်သည်နှင့်နေရောင်ကိုပိုပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့အခါ.
Messina Ragusa မှရထား
ဆိုင်းရာကူစ်း Ragusa မှရထား
Taormina Ragusa မှရထား
Ragusa ရထားမှ Palermo
Amalfi ကမ်းရိုးတန်းသည်စူးစမ်းရှာဖွေရန်နေရာတစ်ခုသာမဟုတ်ပါ အရသာအစားအစာ သို့မဟုတ်ရှည်လျားတနေ့လုံးရေအားကစားခံစားဒါပေမယ့်လည်း အကြိုက်ဆုံးဦးတည်ရာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း Yogi များအတွက်. အဆိုပါကျောက်သလင်း-ရှင်းရှင်းလင်းလင်း azure ရေပိုင်နက်အတွင်းနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့လေပြေကစံပြပဲဆိုယောဂအလေ့အကျင့်နှင့် ပတ်သက်. သင်တို့တွင်အထင်နိုင်စေ, နေရောင်ရိုသေစွာနှုတ်ဆက်ခြင်းအနေဖြင့်တရားအားထုတ်အစည်းအဝေးများနှင့်ပင်ကခုန်ယောဂမှ.
မီလန် Salerno မှရထား
Florence Salerno မှရထား
Salerno ရထားမှ Bari က
အီတလီနိုင်ငံမှအဘယ်သူမျှမအလည်အပတ်ခရီးအထက်ပါနိုင်ပါတယ် ရောမမြို့ တစ်လျှောက်ခရီးသွား ဦး တည်ရာအဖြစ် သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်. အဆိုပါ Trevi ရေပန်း, အဆိုပါ ဗာတီကန်, ရောမဖိုရမ်, ယင်း၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မျက်နှာကျက်နှင့်အတူ Sistine Chapel, နှင့် Colosseum ရှိပေမယ့်အဲဒီမှာနေစဉ်သင်မြင်သင့်ပါတယ်မဖြစ်မနေမှတ်တိုင်အချို့.
အဲဒါကိုမြို့တော်ရဲ့သော်လည်း, '' အဆိုပါထာဝရစီးတီး '' ကိုလည်းပတ်လည်ငြိမ်းချမ်းသောနေရာများအများအပြားရှိပါတယ်, ရောမမြို့မှာရှိတဲ့ယောဂဆုတ်ခွာနိုင်အောင်လူကြိုက်များဘာဖြစ်လို့တိကျစွာအရာဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါအနုပညာ ကမ္ဘာ၏မြို့တော်, သငျသညျကိုခစျြတယျဆိုရငျ Florence စစ်မှန်တဲ့အိပ်မက်ရောက်လာပြီ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပြတိုက် နှင့်အလယ်ခေတ်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ ဗိသုကာအတတ်ပညာ. အဟောင်းကို, အဖြူရောင်အဆောက်အဦးများနှင့် ချစ်စရာကောင်းကြောကျခငျးလမ်းများ သင်တစ်ဦး Renaissance အိပ်မက်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရစေမည်, အတိအကျအရာဖြစ်ပါသည် အဘယ်အရာကို Florence သည်. အဆိုပါအထင်ကရမိုးခုံးနှင့် Uffizi Galleries ဒါပေမယ့်သင်ကဥရောပယဉ်ကျေးမှုတစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းအလယ်ခေတ်ရဲ့အဆုံးမှာဤနေရာတွင်စတင်အတိအကျဘာကြောင့်နားလည်ရန်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရပ်နှစ်ခု.
Rimini Florence မှရထား
Florence ရထားမှ Pisa
ငါလုပ်မယ့်ဝန်ခံပြီ: ငါဗင်းနစ်လည်ပတ်ခဲ့သည့်အခါ, တကယ်တော့ငါကဒီမှာတစ်ဦးအိုးမဲ့အိမ်မဲ့လူတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်နိုင်ခံစားခဲ့ရ (ဆောင်းရာသီအတွက်စာရင်းကိုင်မဟုတ်ပါဘူး, သော်လည်း). ငါအမိုးအကာမပါဘဲလူများ၏ရုန်းကန် trivialize ဆိုလိုဘူး, ဒါပေါ့, ဒါပေမယ့်မြို့သူမြို့သားဒါဣနြေ္ဒကြောင်းဖွင့်မယ့်, ယင်း၏မိုးသည်းထန်စွာခရီးသွားဧည့်များ၏ကြားမှ အသွားအလာ, သငျသညျ၎င်းငျး၏တူးမြောင်းတလျှောက်ငြိမ်းချမ်းရေးမှာအားလုံးအချိန်ကိုခံစားရကြောင်း. ငါဒီမှာပွင့်လင်းမိုဃ်းကောင်းကင်အောက်၌အိပ်နိုင်ခံစားခဲ့ရ, အကြှနျုပျနှငျ့အသမုဒ်ဒရာအနံ့ပတ်လည် balmy အီတလီညဥ့်လေနှင့်အတူ, ရှိသည်န်းကျင်သမျှဒေသခံ trattorias စားအခြေအနေမျိုး, ပဲဒါကြောင့်ဖြစ်, ဒါကြောင့်, ပျြောရှငျသော.
ဘေးဖယ်ငါ့အရိုမန်းတစ်စိတ်ကူးယဉ်, ဗင်းနစ်ရိုးရှင်းစွာအဆင်းလှကြောင်းနှင့်အီတလီနိုင်ငံတစ်အားလပ်ရက်အပေါ်နေစဉ်မဖြစ်မနေ-တွေ့မြင်. အဟောင်းကိုမြို့က၎င်း၏ကျွန်းမှကန့်သတ်, ဒါပေမယ့်အတွက်ယောဂဆုတ်ခွာများများရှိပါတယ် ဗင်းနစ်သို့မဟုတ်ပတ်လည် ဝေးကနေနည်းနည်းနောက်ထပ်နေသော (မြို့သစ်ကိုအစိတ်အပိုင်းအတွက်, ရုံတလွှား တံတား).
မဟုတ်ဘဲမကြာသေးမီကအီတလီနိုင်ငံအပေါ်ဖမ်းမိယောဂ, တိုင်းပြည်ဖြစ်လာနေသည်အဖြစ်ခရီးသွားဧည့်ဆိပ်နှင့်ယောဂ၏ပိုပိုပြီးလူကြိုက်များအတွက်ပြန်လည်ကြုံနေရတာဖြစ်ပါတယ်, နိုင်ငံတကာတွင်. အီတလီနိုင်ငံမှလာလှည့်ခရီးသည်များ၏ဤမျှလောက်များစွာသောအချို့အရည်အသွေးကိုဝိညာဉျသ-ရှာဖွေနေအချိန်လေးကိုရှာဖွေနေကြပြီးသူတို့သည်လည်း Yogi များမှာကတည်းက, ရရှိနိုင်အီတလီမှာယောဂဆုတ်ခွာရှိခြင်းလာမည့်ယုတ္တိခြေလှမ်းခဲ့.
တိုင်းပြည်ပွဲတစ်ပွဲဥရောပတိုက်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးအားလပ်ရက်ခရီးလမ်းဆုံးသောကွောငျ့, ယောဂအီတလီမှာများလွန်းဇာတိအမြစ်များရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကအရေးမပါဘူး. အဆိုပါအလေ့အကျင့်အလွန်လျင်မြန်စွာဒါကောင်းစွာသင်ယခုအီတလီ၏နီးပါးတိုင်းထောင့်ရှိယောဂဆုတ်ခွာနေရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ပေါ်ဖမ်းမိ.
သငျသညျအီတလီစူးစမ်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? အကောင်းဆုံးကိုက်ဘ်ဆိုက်မှ အမိန့်လက်မှတ်များလေ့ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထား Is
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fguide-italy-yoga%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
မိရိအံသည်တစ်ဦး avid ကမ္ဘာကြီးကိုစူးစမ်းရှာဖွေသူနှင့် Yogi ဖြစ်ပါသည်. ငါလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှရှာဖွေစူးစမ်းကမ္ဘာကြီးအစားအစာများနှင့်စာဖတ်ခြင်းတ္ထုကိုချစ်. ငါအလုပ်ရှုပ်မရတဲ့အခါ, ငါလက်ဖက်ရည်ငါ၏စုဆောင်းခြင်းကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ရပ်ကွက်အတွင်းကြောင် petting အချိန်အတန်ကြာသုံးစွဲ. - သငျသညျဒီမှာနှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထား Travel အီတလီ, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား